トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ daydo Pachinko si ay u doortaan in style dagaalka iyo Details
Mashiinka pachinko The, waxaa jira wax la yiraahdo ee Creech. Spec iyo waa qiimo tiro ka dhigan jaaniska ah Ghanna ah. Pachinko of sooc ka, loo kala saari doonaa saddex nooc oo waaweyn. On Ghanna nooca itimaalka waxaa loo yaqaan oo leh hal ama in ka badan ee Creech sare ee Creech buuxda ee 360 ??daqiiqo, nooca loo yaqaan 300 daqiiqo oo 1 ka hor iyo ka dib dhexe ee Creech nuurka nooca dhexe, dhamaadka ka hor iyo ka dib 1 of 100 daqiiqo Amadeji ama Dejihane-Yu Pachi call kan kala duwan, laakiin waxaa la tilmaamay inay si xun ugu kala qaybiyey saddex nooc. Tirada weyn ee jaaniska
, aan arrin ka dhacay, waxa ay noqon doontaa in ay adag tahay in la garaaco.
oo ka mid ah noocyada kala duwan ee gaarka u ah, waa turjumaad in ay ka fekeraan model badiyeen. Isagoo ka hadlayay of model badisay, weli waxaa jira awood qarxa ah heshay uu noqon doono xaqiiqda ah in isgaarsiinta ee Chan fudud si ay u qaabeeyaan. Sidaa darteed, haddii ay dhacdo in aad rabto in aad wax badan oo ku guuleysatay, dabcan Creech sare waxaa lagu talinayaa. jaaniska waa daqiiqadii sare, laakiin waa hit adag, sababta oo ah awoodda qarxa ayaa noqday ka badan Details kale, guuleysto jaaniska uu noqon doono ka badan Creech kasta.
Si kastaba ha ahaatee, khatarta sare leh, sababtoo ah waa soo laabto sare, haddii ujeedadu tahay soo baxay, waxa ay sidoo kale u baahan tahay hab u gaar ah ee maal-gashiga. Intaa waxaa dheer, in model ah oo lagu magacaabo dhawaan ka Badiya dagaal nooc, lagu daydo la caanka ah, guud ahaan aad noqdo xitaa itimaalka waxaa kor u kacay ee Creech sare iyo Details nooca dhexe. Si loo guuleysto, laakiin ilaa xad sidoo kale loo baahan yahay u diyaar-garowga ee maalgashiga, waxaana rajeynayaa madal si ay u doortaan, laga yaabaa in aad garanaa xitaa ka yar maal Dalian Chang.
Intaa waxaa dheer, waxaan doonayaa in aan ku guuleysto, haddii in kulanka weyn wax badan rabaan in ay si hal tago oo joogto ah oo ku guuleystay in xanuun badan, waxa wanaagsan oo ku dooran Details dhexe. Oo xubno ka mid ah xubnihii iyo play ee ku guuleystay, kaliya wanaagsan ku raaxaysan, doono Creech this. Sanadihii la soo dhaafay, waxaa soo baxay qaar ka mid ah lagu daydo, loo yaqaan makiinadaha ST, sidoo kale waxaa jira nooc ka mid ah in raaxaysan degree qaar ka mid ah badhaadhaha.
Waxaa intaa dheer, sidoo kale waxaad filan kartaa joogto Chang. Iyo, kuwa u malaynina inaan la yaabanahay in aan ku guuleysto ama wax yar iyo ciyaaro badan, Dejihane waxaa lagula talinayaa. Mid ka mid ah Times of heshay waa ka yar, laakiin waxaa sidoo kale laga kubada ka mid ah oo ku filan la yaab leh haddii xiriirka ay la Chang. lacagta Investment lacagtu waa soo jiidashada ee Details ka badan wax kasta oo laga yaabaa in yar.
Sidaas, xataa aslanba ay sheegayaan in model guul si ay u doortaan, waxa aad rabto in aad nooca sida loo guuleysto, model la doortay ayaa si weyn u beddeli doonaa. Intee in leeg baad doonaysaa si ay u helaan, sidoo kale sii wadi doontaa in ay saameyn sababta oo ah inta hawlgalka ama waqti ay qaadan.
Dabcan, ixtimaalka Ghanna yar yahay, sababtoo ah in ay dhacdo a ciyaarta sare dheer model waqti qaadan lahaa in aan jaaniska joojinta, waxaa sidoo kale waa xaqiiqo ah in dhammaan doontaa oo keliya by qallalku gabi ahaanba, sida shaqaalaha xafiiska ka dib markii shaqada waa . Habka uu yar yahay (dabcan, waxaa kale oo suuragal ah in ay ku guuleysato badan oo maalmo badan waxaa ku celi, ugu dambeyntii Sidee ... isugu karaa) khatarta maalgashi
, awood taagta daran qarxa ah heshay ka, lacagta maalgelinta, daydo in ay jiraan waxaa laga yaabaa inay dad badan, sababtoo ah awooda ay qarxa ah heshay ka, waa in sidoo kale waa mid ka mid noqoshada-shot. Haddii Details in aadan si fiican u ogahay, sidaas darteed waxaan ku qoran faahfaahin dheeraad ah ee wargeysyada sida uu haatan yahay, ka hor inta uu u ciyaaro, waxaa laga yaabaa in fiican in aad ka akhriyi in si ee tixraaca. Daydo in ay jiraan waxaa laga yaabaa inay dad badan, sababtoo ah awooda ay qarxa ah heshay ka, waa in sidoo kale waa mid ka mid noqoshada-shot. Haddii Details in aadan si fiican u ogahay, sidaas darteed waxaan ku qoran faahfaahin dheeraad ah ee wargeysyada sida uu haatan yahay, ka hor inta uu u ciyaaro, waxaa laga yaabaa in fiican in aad ka akhriyi in si ee tixraaca. Daydo in ay jiraan waxaa laga yaabaa inay dad badan, sababtoo ah awooda ay qarxa ah heshay ka, waa in sidoo kale waa mid ka mid noqoshada-shot. Haddii Details in aadan si fiican u ogahay, sidaas darteed waxaan ku qoran faahfaahin dheeraad ah ee wargeysyada sida uu haatan yahay, ka hor inta uu u ciyaaro, waxaa laga yaabaa in fiican in aad ka akhriyi in si ee tixraaca.